Amar ka dhaqan galay ismaamulka Laikipia | Star FM
Home Wararka Kenya Amar ka dhaqan galay ismaamulka Laikipia
Amar ka dhaqan galay ismaamulka Laikipia
Waxaa ismaamulka Laikipia ka dhaqan galay amar mamnuucaya in dadweynaha ay magaalooyinka waawayn iyo xarumaha laga dukaameysto ku dhex sitaan hubka noocyadiisa kala duwan xita mindiyaha.
Taliyaha booliska ee dowlad deegaankaasi John Nyoike ayaa arrinkan shaaciyay.
Waxaa uu sheegay in ciddii aan amarkan u hoggaansamin la xirayo dibna lagu soo oogaya dacwad maxkamadeed.
Taliyaha ayaa xusay in arrintan ujeedada laga leeyahay ay tahay yareynta kiisaska weerarrada iyo hanjabaadaha bulshada dhexdeeda gaar ahaan marka ay ku sugan yihiin xarumaha ganacsi ee ku yaalla degmooyinka Rumuruti, Ol-Moran iyo Dol dol.
Previous articleDowladda oo amartay in laga hor taggo badeecadaha sharci darrada ah ee dalka la soo geliyo
Next articleIn ka badan 500 oo ka mid ah ururrada xuquuqul aadanaha Myanmar oo baaq u diray QM